जसले राजनीति गर्न स्थायी जागिर छाडिदिए – Yug Aahwan Daily
Friday 18th September 2020/
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजारभन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण
कर्णालीमा शुक्रवार ३५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
क्यान कार्यसमितिको बैठक असोज ५ र ६ गते हुने
नेकपा सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सर्‍योे
नयाँ शक्तिद्धारा डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल नेपाली भूमिमा प्रवेश
डा. केसीको माग पूरा गरेर जीवनरक्षा गर्न चिकित्सक संघको माग
बैतडीले बारअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै
जसले राजनीति गर्न स्थायी जागिर छाडिदिए
युग संवाददाता । २ श्रावण २०७७, शुक्रबार ११:२५ मा प्रकाशित
हरेक व्यक्तिको जीवनमा अवसरसँगै चुनौती पनि आउँछन् । तर तिनै चुनौतीलाई जसले सामना गर्दै अघि बढ्छ, त्यसैले अवसरसँगै मिठो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्छ । हरेक व्यक्तिका आआफ्नै सपना हुन्छन् । कसैका सपना पुरा हुन्छन्, त कसैका सपना अधुरै रहन्छन् । तर जीवनमा जसले सपना देखेर संघर्ष गरिरहेको छ । अवश्य उ सफल पनि भएको धेरै उदाहरण छन् । धेरैलाई पढेर सरकारी जागिर खानैपर्छ भन्ने लाग्छ । तर यहाँ सरकारी जागिर छोडेर कृषि कर्मदेखि राजनीतिमा होमीनेहरु पनि धेरै छन् । जसमध्ये एक उदाहरण पात्र हुन्, हाल साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहाल । लामो समय शिक्षक पेशामा रहेर सेवा गरेका उनले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालिन राजनीतियक यात्रा सुरु गरेका हुन् । आजको जम्काभेटसँग प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
तत्कालिन रतु गाविस–६ हालको वीरेन्द्रनगर–१५ मा विसं २०२८ जेठ ३ गते सोमबारका दिन मेरो जन्म भएको हो । मेरो बाल्यकाल गाउँमै वित्यो ।म घरको जेठो छोरा हुँ । हामी दुईभाई र तीन बहिनी एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका थियौं । म कक्षा १ देखि ३ सम्म गाउँकै रतु स्कुलमा पढेँ । बाबा कृष्णप्रसाद दहाल सोही स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । म बाबासँगै स्कुल जाने आउने गथ्र्येँ । गाउँको स्कुल कक्षा ३ सम्म मात्रै भएकाले कक्षा ४ देखि ६ सम्म मावि मेहेलीमा पढेँ । रतुदेखि मेहेली जानआउन करिब ३ घण्टा बढी समय लाग्थ्यो । साथीहरुसँगै रमाइलो गर्दै स्कुल आउनेजाने काम भयो ।
कक्षा ७ देखि ९ सम्म अमरज्योति मावि नेवारे र कक्षा ९ र १० जनमाविमा पढेँ । २०४४ सालमा मैले एसएसली उतिर्ण गरेको हँु । पछि उच्च शिक्षाको क्रममा वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसबाट वीए र कीर्तिपुरबाट एमए पास गरेको छु । भने वीएड र एमएड शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतबाट गरँे । बाल्यकालमा खेतवारी, मेलापात गरिन्थ्यो । गोठाला जाने र बारी जोत्ने काम गरेको अहिले पनि ताजा लाग्छ । घरमा गाई, भैंसी, बाख्राहरु थिए । त्योबेला गाउँमा पाइने काफल तथाअ न्य फलफुल टिपेर वीरेन्द्रनगरमा आएर बेचिन्थ्यो । विदाको दिनमा आफैले टिपेको काफल बेचेको याद छ । मलाइ सानैदेखि पैंसा कसरी कमाएर आफ्नो खर्च आफै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । मैले त्यसरी फलफुल बचेर कमाउको पैंसाले कापी, कलम लगायत शैक्षिक सामाग्री किन्थ्येँ । बचेको पैंसाले खाजा खर्च व्यवस्थापन गरी बचत समेत गथ्र्येँ ।
घरव्यवहार धान्न विहे
घर चलाउनका लागि मैले विहे गर्नुपर्ने भयो । त्यही बेला बाबाले घर बुझ्ने र चलाउने खालको केटी खोजिदिनुभयो । उसको र हाम्रो पारिवारीक पृष्ठभुमी पनि मिलेको । बाबा, आमाले इच्छाएपछि मैले पनि विहे गर्ने निधो गरेँ । विहेपछि श्रीमतीले राम्रेसँग घर चलाएपछि मलाई पनि सहज भयो । अहिले सानैमा विहे गरेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन । श्रीमतीको कारण आज म यो ठाउँमा छु । मेरो हरेक संघर्षमा श्रीमतीको साथ छ । विहेपछि उनी सजिलै घरको संस्कारमा बस्न सफल भइन् ।
अध्यापनमा २७ वर्ष
१८ वर्षको उमेरमै म स्थायी जागिर खान सफल भएँ । २०४६ मा प्रावि पारेगाउँ रतुबाट स्थायी शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । बाबाको पनि सोही स्कुलबाट जागिर सुरु भएको थियो । म सानोमा सोही स्कुल पढेको हुँ । स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको २०४६ सालकै अन्तिममा जनसेवा प्रावि घुस्रामा सरुवा भएँ । १९ वर्षसम्म म अध्यापन पेशामा रहँे । जनसेवामा नौ वर्ष शिक्षक सेवापछि साढे ९ वर्ष प्रधानाध्यापक बनेँ । पुन साढे ८ वर्षसम्म श्रीकृष्ण संस्कृत उच्च मावि इत्राममा प्रधानाध्यापकको रुपमा सेवा गर्ने मौका मिल्यो । २०७३ मंसिर ९ गते ४५ वर्षको उमेरमा शिक्षक पेशाबाट राजीनामा दिएँ । करिब १५ वर्ष जागिर खाने अवधि बाँकी नै थियो । तर खुला राजनीति गर्न मैले शिक्षकबाट राजीनामा दिएँ ।
समाज सेवामा प्रेरणा
बाबा शिक्षक भएकाले शिक्षक पेशा नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । आफन्जन सबै शिक्षक पेशामा थिए । त्यसैले लोकसेवा मार्फत अन्य पेशामा ध्यान गएन । पछि म पनि शिक्षक पेशामा आबद्ध भएर समाज सेवामा लागेँ । शिक्षक संघ सुर्खेतको जिल्ला अध्यक्ष, संघकै तत्कालिन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सचिवमा चारवर्ष काम गरेको अनुभव छ । सन् १९९८ मा वीरेन्द्रनगर जेसीज सुर्खेतको अध्यक्ष भएँ । सन् २००५ मा नेपाल जेसीज राष्टिय अध्यक्षमा सर्वसम्मत र २००६ मा अन्तराष्टिय सदस्य र अष्टियाको भियानाबाट एसीया प्यासेफिकको कोडीनेटरको रुपमा पनि काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसैबाट मेरो समाज सेवाप्रतिको थप भावना विकास हुदै गयो । भने आत्मविश्वास र नेतृत्व विकासको क्षमता पनि बढ्यो । शिक्षकहरु मध्येबाट नेपालमै पहिलो जेसीज अध्यक्ष हँु । म शिक्षक पेशामा रहदाँ नेपाल सरकारले शिक्षा दिवसमा उत्कृष्ट केन्द्राध्यक्ष पुरस्कार, उत्कृष्ट शिक्षक मध्यपश्चिमबाट पीपी प्रसाइँ राष्टिय पुरस्कार नगद सहित सम्मान गरेको छ । राष्टिय शिक्षा पदक तथा सम्मान पाएको छु ।
बाबा २०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । म २०४५ मा नेविसंघमा आबद्ध भएँ । त्यहीबाट जसले राजनीति गर्न स्थायी जागिर छाडिदिए हरेक व्यक्तिको जीवनमा अवसरसँगै चुनौती पनि आउँछन् ।
तर तिनै चुनौतीलाई जसले सामना गर्दै अघि बढ्छ, त्यसैले अवसरसँगै मिठो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्छ । हरेक व्यक्तिका आआफ्नै सपना हुन्छन् । कसैका सपना पुरा हुन्छन्, त कसैका सपना अधुरै रहन्छन् । तर जीवनमा जसले सपना देखेर संघर्ष गरिरहेको छ । अवश्य उ सफल पनि भएको धेरै उदाहरण छन् । धेरैलाई पढेर सरकारी जागिर खानैपर्छ भन्ने लाग्छ ।
तर यहाँ सरकारी जागिर छोडेर कृषि कर्मदेखि राजनीतिमा होमीनेहरु पनि धेरै छन् । जसमध्ये एक उदाहरण पात्र हुन्, हाल साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहाल । लामो समय शिक्षक पेशामा रहेर सेवा गरेका उनले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालिन राजनीतियक यात्रा सुरु गरेका हुन् । आजको जम्काभेटसँग प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको गेहेन्द्रप्रसाद दहाल, संयोजक साझा पाटी, कर्णाली राजनीति यात्रा सुरु भएको हो ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा र २०४७ पछि शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भइयो । त्यतीबेला पाटीको पनि क्रियाशिल सदस्य थिएँ । पछि २०७३ मा कांग्रेस सदस्यता परित्याग गरेँ । स्वतन्त्र रुपमा २०७४ बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएँ । पहिलो पटक स्वतन्त्रबाट मेयर निर्वाचन लड्दा सम्मानजनक मत पनि पाइयो । पछि विवेकशिल साझा पाटीमा आबद्ध भइ २०७४ कै प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातीक सांसदको उम्मेदवार बनेँ । यो पाटीको कर्णाली प्रदेश संयोजक एवंम केन्द्रिय सदस्य छु । यो पाटीमा लाग्दा मलाई गौरवको अनुभुती भएको छ ।
खुसी र सन्तुष्टीका क्षण
जीवनभर चुनौती सामना गरेकै कारण आज धेरै अवसर प्राप्त गरेको छु । हरेक उपलब्धि र अवसर चुनौतीको सामना पछि नै प्राप्त हुन्छ । त्यसरी चुनौतीबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिले पनि धेरै खुसी मिल्छ ।
घटना ः नेपाल जेसीजलाई जिताउनु र म पनि जित्नु चुनौती थियो । दलिय पद्धतिमा पनि स्थानीय तहको निर्माचनमा मैले कल्पना नगरेको मत पाउदाँ निकै खुसी भएको थिएँ । मलाई भोट दिने सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चहान्छु । म जुन जुन नेतृत्वमा जहाँ बसेँ । त्यहाँ म बसेको संस्थालाइ नै जिताउदाँ म खुसी छु । यस्तै कुराले मलाई आत्म सन्तृष्टी मिलेको छ ।
अहिले म ४९ वर्षको भएँ । अझै समाज सेवाका लागि काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेको छ । समाजका लागि केही गरौं भन्नेइच्छा शक्ति छ । सत्यको पछि लागेर न्याय र समानताका लागि निस्पक्ष रुपमा काम गर्न चाहान्छु । त्यसका लागि आवश्यक अवसर आएमा नेतृत्व गर्न तयार छु ।
(२०७७ साउन २ गते शुक्रबार युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)